Samy manana ny kandida tohanany moa ny tsirairay. Mifamahofaho ihany koa ny karazam-baovao sy ny honohono, hany ka maro ihany no fanina. Tsy voaresaka intsony ny zava-nitranga mialoha ny nirosoana tamin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ny alarobia 7 novambra 2018 iny, dia ny fidiran’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny zotram-pifidianana eto Madagasikara, izay tsy vao izao ihany fa na tamin’ny 2013 ihany koa aza fony nampiharina ilay “ni..ni”. Nanaiky ny hanome 12 tapitrisa dolara na 43 560 000 000 Ariary amin’ny alalan’ilay tetikasa Sacem mba hamatsiana ara-bola ny zotram-pifidianana eto Madagasikara ireo firenena mpiara-miasa. Nanara-maso ny fandrafetana ny lisi-pifidianana izy ireo, tany ivelany no natonta ny bileta tokana, manana ny foibeny eny amin’ny CENI Alarobia io Sacem io. Maro ny mpanara-maso avy amin’ny vondrona iraisam-pirenena tonga teto nijery ny zava-misy mialoha ny propagandy, nandritra ny propagandy, ny tontolo andron’ny fifidianana, nanatrika ny fanisam-bato ary ankehitriny dia mbola manara-maso ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Anisan’ny nandefa mpanara-maso eto Madagasikara ny Sadc, Vondrona Afrikanina, Fikambanana iraisam-pirenena momba ny Frankofonia (OIF) ary ny vondrona eoropeanina. Ity farany dia efa namoaka fanambarana savaranonando ary namaky bantsilana ny fisiana kandida nizara vola nandritra ny propagandy. Azo antoka fa tsy hitazam-potsiny ny zava-misy ny vahiny, izay namatsy ny ampahany betsaka tamin’ny tetibolam-pifidianana ary maro amin’ireo mpamakafaka politika sy mpandinika no milaza fa tsy maintsy ny kandida eken’ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy azony antoka fa afaka hiara-kiasa tsara aminy no ho filoha manaraka eo. Ry zareo tandrefana ahitana ny Amerikanina, Frantsay, Alemana miampy ireo mpamatsy vola mahazatra dia ny Banky iraisam-pirenena sy ny Tahirim-bola iraisam-pirenena ary indrindra fa ny firenena mikambana sy ireo rafitra maro samihafa ao anatiny no ambara eto hoe fianakaviambe iraisam-pirenena. Fikambanana iray goavam-be izay iaraha-mahita fa mifaninana ara-toekarena sy ara-politika amin’ny tatsinanana ahitana ny Sinoa sy ny Rosianina.